Firotsahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina : « Misy fotoanany ny zava-drehetra » -
AccueilRaharaham-pirenenaFirotsahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina : « Misy fotoanany ny zava-drehetra »
31/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha toa ka efa mazava ny hazakazaka ny amin’ny ho filatsahan-ko fidian’ireo kandida sasany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, tahaka ireo mpanao politika izay efa nitondra teo aloha ary tsy mitsahatra mitety faritra. Dia mbola tsy nilaza ny heviny mazava kosa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha nanontaniana mahakasika izany nandritra ny lanonam-pahatsiarovana ireo mahery fo teny Mausolé sy Ampitifirana Ankatso, satria mazava ny fanontanian’ ny mpanao gazety milaza fa efa andrasan’ny rehetra ny filazany amin’ny fomba ofisialy ny mety ho firotsahany. “Mahafinaritra ahy izany maheno ny feonareo hoe andrasan’ny olona izany, miteny amin’ny olona aho hoe ny zavatra rehetra tsy tonga raha tsy amin’ny fotoanany sy amin’ ny androny daholo. Milaza foana aho hatramin’ izay fa ny filoham-pirenena dia miasa ary miasa mafy, ary izany no hiresahako foana ny fitiavan-tanindrazana. Satria dia mihodina amin’ izay daholo ny toe-tsaina hampandrosoana ny firenena, ary heveriko fa izay no foto-kevitra lehibe hiatrehantsika hiatrehan’ny filoham-pirenena ny zavatra rehetra izay miseho, na androany na rahampitso, na amin’ny ho avy rehetra” Hoy ny valintenin’ny filoha raha nanontaniana.
Noho izany dia mbola mipetraka ho baraingo izany ny mikasika ny filatsahan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina na tsia, miainga tamin’io valim-panontaniana io. Hatreto izany aloha dia nambaran’ny filoham-pirenena malagasy fa mbola manatanteraka ny asa amin’ny maha filoham-pirenena azy ny tenany, ary ho azy dia ny fampandrosoana miainga amin’ ny fitiavan-tanindrazana no hanompanany ny fomba fiasa. Nandritra ny lahateniny nandritra ny fahatsiarovana ny faha-70 taona namonoana ireo mahery fon’ny tanindrazana no nanamafisany fa ny fitiavan-tanindrazana marina nasehon’ireo mahery fo ihany no ahafahana manova sy hahatongavana amin’ ny fampandrosoana. Noho izany hoy ny filoham-pirenena dia tsy tokony ho verivery amin’izao, ary tsy tokony havadika ny tolon’ny mahery tamin’izany fotoana, satria ankehitriny izy io hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia misy mamadika ho amin’ ny tombontsoany manokana fa tsy ho an’ ny firenena. Ireo izay mamadika ny tolona ho amin’ ny tombontsoany manokana ireny hoy ny filoha dia ireo izay mamboly korontana ka mampihemotra ny fampandrosoana izay tokony ho azon’ny firenena.